2011 ~ NPNGMyanmarP
ဒီနည်းလမ်းကိုမကြိုက်ရင် နောက်တစ်နည်းရှာ ၀ါဒီဇွတ်မေ...
9:03 PM NPNG(MyanmarP)
ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ ချီတက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခုအချိန်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန် အစည်းအဝေးကျင့်ပလျှက်ရှိရာ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းများမှ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ စည်းစနစ်တကျဖြင့် အလုပ်လုပ်နေသော လုပ်ငန်းတစ်ခု လည်ပတ်ရန် အခက်ခဲပေါင်းများစွာ ရှိနိုင်မည်မှာ မမှန်ပင်တည်း။ အမှန်တကယ်တော့ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးဖို့အတွက်ကို အရင်ဆုံး အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ခဲ့ကြရတာပါ။ ဖိအားတွေအမျိုးမျိုးကြားမှ အစိုးရက ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် အစိုးရနှင့် ပြည်သူလက်တွဲညီလို့သာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကြီး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေ ဖော်ဆောင်ရာကို အခုလိုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်သူ အားလုံးသည်လည်း နောင်တစ်ချိန်မှာ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် လမ်းပြသူတွေဖြစ်လာကြမှာပါ။
ပြည်သူဆိုတာက လိုအပ်ချက် အမြဲရှိနေမှာပဲ… အပြစ်မဟုတ်သော လိုအပ်ချက်တွေ အဖြစ်နှင့်သာ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရတွေက နားလည်မှုရှိရမယ်။ ဒီလိုရှိခဲ့လို့လည်း လိုအပ်ချက်တွေကို ယခင်ကထက် ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာ မြင်တွေ့ရုံတင်မက လက်တွေ့ ခံစားနေကြရတယ် မဟုတ်လားဗျာ…။ အတိုက်ခံဆိုတာကတော့ ရှိနေမှာပဲ… ကောင်းသောအမြင်ကို လက်ခံနိုင်သူရှိမည် သို့သော် မကောင်းသော အမြင်နှင့် ဆန့်ကျင်မည့်သူလည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။ အမြင်တွေမတူတာကလည်း အပြစ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို အစွဲပြုပြီး ဖျက်လိုဖျက်စီး စိတ်တစ်ခုထဲကြောင့် အစွန်းရောက် ၀ါဒသမားတွေကိုတော့ အပြစ်လို့ခေါင်းစဉ် တပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ လက်ခံတဲ့အရာတွေကို လက်မခံပဲ ဆန့်ကျင်ပြီး ပြည်သူတွေကို ဒုက္ခရောက်အောင် သွေးထိုးလှုံဆော်တာဟာ အတိုက်ခံသက်သက်သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားလွန်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး၊ ဘယ်လောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲ ဒီအတိုက်ခံသမားတွေက မဆင်းရဲတာတော့ သေချာတယ်… ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင် ဒီအလုပ်မလုပ်ကြဘူး။ နိုင်ငံတကာမှာ ပြည်ပကိုထွက်လာပြီး ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ မိကောင်းဖခင် သားသမီးပေါင်းများစွာ ရှိနေသည်။ သူတို့တွေမှာလဲ အမြင်ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘ၀အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကွာခြားကြတယ်။ အတိုက်ခံသမားတွေရဲ့ သွားရာလမ်းကို မလိုက်တဲ့လူတွေကို လေးစားရမှာပဲ။ အတိုက်ခံသမားဆိုတာက အလွယ်လိုက်တဲ့ မတည်မြဲသော ဘ၀အာမခံချက်ရှိလို့သာ မြန်မာနိုင်ငံ ပျက်စီးဖို့အရေး ဇောက်ချ လုပ်ကိုင်နေကြတာပဲ မဟုတ်လား။ သေချာတာတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက အမြဲတမ်းအပြစ်တွေ ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး။ အမြဲတမ်းနိုင်ငံတကာအလယ်မှာ ပြောစရာဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သိစေချင်တယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ သြဇာကို မခံချင်လို့ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နေတာ ခင်ဗျားတို့ အားကိုးနေတဲ့ အမေရိကန်တောင် ဘာလုပ်နိုင်လို့လဲ… အဲဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာပြည်က လူကြီးတွေ ဘယ်လောက်ထိ ဥာဏ်ပြေးသလဲ စဉ်းစားကြည့်တော့။ ယနေ့ကမ္ဘာမှာ ကိုယ့်ထက်အင်အား တောင့်တင်းတယ် ဘယ်လိုပြောပြော အမေရိကန်နဲ့ဖြစ်တာနဲ့ အတိုက်ခံရတာပဲ မဟုတ်လား။ ခင်ဗျားတို့ အတိုက်ခံတွေ ခေါင်းမရှိလို့ အခုချိန်ထိ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မရှိတဲ့ ပေါကြောင်ကြောင် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ စစ်ပြေးတွေကို လိုက်လံဖော်ထုတ်ပြီးသာ အမြတ်ရှာနေတာ ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့အချင်းချင်းမှာ ဖော်ကောင်လုပ်နေတာ အများကြီးပဲ။ တစ်ချို့ဘလော့တွေမှာ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒီမိုငတုံးတွေကို အလိုမရှိပါ၊ ဦးနှောက်မရှိသော နိုင်ငံရေးသမားများ ဘေးထွက်ပါ။ အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးတဲ့ နိုင်ငံရေးဘိုးတော်များ နုတ်ထွက်ပေးပါ…. တပ်မတော်ရဲ့ အပြစ်တွေ လိုက်ရှာမနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်း ယုံကြည်ချက် ကွဲပြားပြီး ဖော်ကောင်တွေကိုလည်း သတိထားဦး။ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်တဲ့အခါ နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော် မကောင်းဘူးလို့သာ ပြောနေကြပေမဲ့ သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ချင်နေကြတယ်။ လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက် နောင်တရချိန်သည် အရမ်းနောက်ကျနေခဲ့ပြီး။ ဒါကြောင့် မှားပြီးသမျှ ဆက်မှားဖို့ကို ဘ၀အာမခံချက်အတွက် တာဝန်ယူခဲ့ရတယ်။
ရှက်တက်ရင် လဲသေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက ဒီလူတွေအတွက် ရှိမယ်မထင်ဘူး။ အရှက်နဲ့လူလုပ်တာ မဟုတ်မှတော့ ရှက်စရာလည်း မလိုဘူးပေါ့ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဖြစ်ပါလျှက်နဲ့ မြန်မာပြည်အကြောင်း မကောင်းရေးတာ အရမ်းရှက်စရာပါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီအလုပ်ကို လုပ်ချင်လား… ဘယ်သူမှလုပ်ချင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်သူတို့ လုပ်နေကြသလဲ… မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ဘယ်မှာလဲ…။ ဘာမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်မှ မရှိဘူးလို့ပြောရင် ခံနိုင်မည်မဟုတ်။ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ အလုပ်ဖြင့် သက်သေပြနေလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ကျွန်တော့်အထင် ပြောရရင် မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့ သံယောဇဉ်မရှိကြလို့ သစ္စာတရားကို စွန့်လွတ်ထားပြီး ဒီအလုပ်တွေကို လုပ်နေကြတာ ရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုက်ခိုက်တယ်။ ပြည်သူကိုကျတော့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မြောက်ပေးတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အားကိုးအားထားပြုရတဲ့ စစ်တပ်ကို ပြည်သူနှင့် အစိုးရကြား သွေးခွဲပေးမယ်။ ရန်တိုက်ပေးမယ်။ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လူစိတ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာက မြန်မာစကားပြောနေသော သူများသာ အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေတာ ယနေ့အထိဆိုတာ ငြင်းစရာရှိမယ် မထင်ဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဟိုတလောက ကြားလိုက်ပါတယ်… ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး ထကြွပြီးတဲ့… Just do it ဆိုတဲ့အဖွဲ့တဲ့… မီဒီယာတွေ ဘယ်လောက် ဖွသလဲဆိုရင် ရန်ကုန်မှာဖြစ်နေပါပြီး။ အထက်မြန်မာပြည်မှာတော့ ပိုအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေက အပေါစားစည်းရုံးရေးတွေ ဖြစ်မယ်လို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် မသုံးသပ်ခဲ့ကြဘူး။ မမှန်မကန်ရေးနေတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတာကိုလည်း ထည့်မတွက်ကြဘူး။ ထို့အပြင် ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီး စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒကိုပါ မေ့နေကြတယ်။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အရမ်းကြီးကျယ်မယ်… အဓိပ္ပာယ်ရှိတာကို လုပ်ကြတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။ အခုကျတော့ ပါးစပ်က လျှောက်အော်နေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာကို ကောင်းကောင်း သိလိုက်ရတယ်။ ခံယူချက်မရှိသော ဦးတည်ရာပျောက်နေသော အမှားတစ်ခုခုကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံထားသူများရဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုတာ သိလာရတယ်။ ဒီအတွက်လည်း အထူးပင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ နောင်လာနောင်သားတွေ ကျွန်တော်ရေးပြတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ရရင် ပိုပြီးတော့ စိတ်ပျက်မိမှာ ဧကန်စင်စစ်ပေါ့ဗျာ။
လူတိုင်းမှာ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ ဥာဏ်တွေပါလာပြီးသားပါ။ စာပေဗဟုသုတ လိုက်စားသူမှန်သမျှ ပိုင်ခြားသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့တွေက ဘာလို့မဟုတ်တာတွေကို အချိန်ကုန်ခံပြီး ရေးနေကြမှာလဲ။ အကောင်းဆုံးနဲ့ အမှန်ကန်ဆုံးသတင်းတွေ၊ နိုင်ငံတော်တိုးတက်စေမယ့် သတင်းတွေနှင့် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတတွေကိုဖော်ထုတ်၊ အလှတရားတွေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ထားမွန်မြတ်မှုတွေကို ဘာကြောင့်မရေးနိုင်ရမှာလဲ…။ ရန်တိုက်ပေးမဲ့စာတွေ ရေးမယ့်အစား ပြည်သူတွေကို စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေး ဆောင်းပါးတွေ၊ အကျိုးပြုစာတွေ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာတွေကို ရေးသင့်ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ မီဒီယာဆိုတာက တစ်ဖက်နားပေါက်နေသူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေကို ဒါလေးလုပ်လိုက်လို့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ကိစ္စမရှိပါဘူး… အေးဆေးပါပဲ။ နောက်တစ်ခါ ထပ်လုပ်လိုက်တယ်… ပြန်စဉ်းစားမယ်… ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ခဏခဏ ကိန်းအောင်လာပြီး ဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီး၊ ကိစ္စရှိနေပြီးလို့သာ မှတ်ယူရမယ်။ လူတိုင်းရောက်အောင် သွားနေရတဲ့ သေလမ်းမှာ ကိစ္စရှိနေလိမ့်မည်။
အရာရာမှာ ဆန့်ကျင်ရန် ခံယူချက်အဖြစ်နဲ့ ယူဆထားလို့ရှိရင် စိတ်ထဲမှာ ပဋိပက္ခ အများကြီး ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အရည်မဖျော်နိုင်သေးတဲ့ အစိုင်အခဲတွေကြောင့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း မမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ စည်းရုံးနေလို့ မရပါဘူး။ အသိဥာဏ်ရှိသော အတတ်ပညာရှိသော လူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုကိုလည်း မီဒီယာတွေနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများကို အသိပေးချင်ပါတယ်။ ဒီလိုစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားလို့လည်း ဘက်စုံထောင့်စုံမှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိတ်ဆို့မှုတွေ မီဒီယာထိုးနှက်ချက်တွေ ကြားမှာရပ်တည်နေတဲ့ မြန်မာဆိုတာကိုလည်း မမေ့စေချင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ ဂုဏ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောပြမယ်… အနောက်နိုင်ငံတွေ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ နှင့် ပြည်ပြေးနေသော သူတွေအမျိုးမျိုး တိုက်ခိုက်တာတောင် ကမ္ဘာမှာမြန်မာပြည် ရပ်တည်နေတုန်းပဲ။ ယနေ့မြန်မာလူမျိုး မပျောက်သေးဘူး… ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ဆက်လက်တည်တံ့ ပြန့်ပွားအောင် ရဟန်းသံဃာတွေ၊ ပြည်သူလူထုတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့တာ ဂုဏ်ယူမဆုံးနိုင်ပါဘူး…။
ကျွန်တော်တွေးမိတာ တစ်ခုရှိပါတယ်… မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်း ပိုင်ဆိုင်သူတွေသာ ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်း မရှိသူတွေဟာ တစ်ဘ၀လုံး လုပ်နေလဲ လိုချင်တာတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ မထင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ပါ… တပ်မတော်ကို အံတုလာတာ နှစ်ပေါင်းတော်တော် ကြာပါပြီး။ တိုက်ခိုက်နေတာလဲ အတော်ကြာပါပြီး ပျက်စီးသွားသလား… ဒါလည်းမေးခွန်း ထုတ်စရာပဲ… မေးခွန်းထုတ်တယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ ဖြေဖို့မဟုတ်ဘူး… တပ်မတော်ကို ဖျက်လိုဖျက်စီး လုပ်နေသောသူတွေနှင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မီဒီယာတွေမှ တိုက်ခိုက်နေသော သူများအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့မှာမှ လက်နက်မရှိတာဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ပေးနေတဲ့လူတွေလည်း အများကြီးပဲ။ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ… ဒါဆိုရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိပါတယ်။ ယခုအချိန်ထိ တိုက်နေတုန်း ရှိပါတယ်။ ၀င်နိုင်သလား… ခံယူချက်တွေ ပြင်းထန်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့… တပ်မတော်က မြန်မာနိုင်ငံကို ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ ယုံကြည်ထားရင် တောတွင်းလက်နက်ကိုင်တွေ အများကြီးရှိတာပဲ။ ခင်ဗျားတို့ အားပေးနေတဲ့ သောင်းကျန်သူပေါင်းများစွာထဲကို ၀င်လိုက်ပါလို့ အကြံပေးချင်တယ်။
မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ပက်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။ တိုင်းပြည်မှာ တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ ဟန်ချက်ညီညီ ဆောင်ရွက်နေတာတွေကို ဘာကြောင့်မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်နေရပါသလဲ။ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရပ်တည်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုယ့်အခန်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်နေတာကို ဖျက်လိုဖျက်စီး ၀ိုင်းလုပ်နေတာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ စဉ်းစားရင် မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ အဖြေထွက်မှာပါပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်တော့လည်း မလုပ်လို့၊ လုပ်ပြန်တော့လည်း လမ်းစဉ်မမှန်ကန်လို့၊ လိမ်လည်မှုတွေ ဆိုပြီး အမည်တပ်နေတာ ဘယ်လိုနားလည်ပေးရမလဲ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိတဲ့ လူအနေနဲ့ဆို တော်တော်ရှက်ဖို့ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်း ပိုသိကြမှာပါ။ အနည်းဆုံးတော့ အိပ်ရာဝင်ချိန်လေးမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက် စဉ်းစားမိကြမှာပါ။ တခါတလေ ခင်ဗျားတို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာရော ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်တွေက တစ်နေ့တစ်နေ့ သူတပါးမကောင်းကြောင်း သတင်းရေးဖို့ တိုက်ခိုက်ဖို့ကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ ပြည်ပြေးတွေထဲမှာ ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကွသာ အော်နေတာ လူမျိုး/ဘာသာ ပြောင်းသွားသူတွေ အများကြီးပဲ… မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်က အဲလိုမျိုး ရှင်သန်ကြတာ…။ ခင်ဗျားတို့ မကျေနပ်တဲ့ တပ်မတော်သားတွေက ပြည်ပရောက်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြည်ညိုနေတုန်းပဲ… ဘယ်နိုင်ငံသားကမှ ဓားထောက်ပြီး ငါတို့ဘာသာထဲ ၀င်ပါလို့ ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး….
တပ်မတော်အကြောင်းလေး ပြန်ဆက်ရအောင်…. အရင်ကောင်းလို့ အခုကောင်းသည် အခုကောင်းလို့ နောင်ကောင်းပါမည် ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကား ရှိတာနဲ့အညီ တပ်မတော်သည် မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နေတာ ယနေ့အချိန်ထိပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်သွားပြီးဆိုရင် တပ်မတော်အနေဖြင့် ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ အိပ်ဆောင်ကို ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ထဲမှာ ပြည်သူ့အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေပါဝင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ရရှိအောင်လည်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို ကြိုးစားနေကြတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် လက်ကမ်းကြိုဆို နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေ၊ ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံ ထူထောင်ချင်နေတာကို လုံးဝ ခွင့်ပြုလို့မရသလို ခွင့်လွတ်ပေးလို့လည်း မရပါဘူး။
ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေ မဟုတ်တာတောင် ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်နေတာ… ပေးများပေးလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်မလဲ…. တယူသန်ဝါဒတွေ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာက ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ သောင်းကျန်သူအချို့သာ မိုင်းထောင်မိုင်းခွဲ လုပ်နေကြလို့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေ အလကားသေကြေ ပျက်စီးနေရတယ်ဆိုတာ ခဏခဏကြားနေရတာပဲ။ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင် စစ်သားသည် အကြောင်းမရှိပဲ မိုင်းမထောင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ဘယ်လောက်ထိ မမှန်မကန် ရေးနေသလဲဆိုရင် မြို့ထဲဗုံးပေါက်တာတောင် စစ်တပ်က တမင်တကာ လုပ်တယ်ဆိုပြီး ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော်သေချာ ရှင်းပြလိုက်ချင်တယ်။ မြို့တွင်းမှာ မိုင်းထောင်ဖို့ မပြောနဲ့ အကြောင်းကိစ္စ (သို့မဟုတ်) လုံခြုံရေးမဟုတ်ပဲနဲ့ သေနတ်တောင် ကိုင်ဆောင်ခွင့် မရှိဘူး။ မြို့တွင်းမိုင်း ထောင်ရလောက်အောင်လည်း အသိဥာဏ် မကင်းမဲ့ဘူး။ ကိုယ့်မြို့တွင်းမှာက ကိုယ့်ဆွေးမျိုးတွေ နီးစပ်ရာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ ရှိနေတာကို လူမဆန်တဲ့ အလုပ်ရှောင်ကျဉ်တယ်။ ထို့အပြင် စစ်သားတစ်ယောက် မိုင်းဝယ်ယူလို့ မရဘူး။ ကြီးကြပ်ကန့်သတ် ပစ္စည်းတွေကို သုံးချင်တိုင်းသုံးလို့မရဘူး။ အမိန့်မရပဲ ဘာတစ်ခုမှ လုပ်လို့မရဘူး ဆိုတာတွေကို နားလည်ပြီးမှ သတင်းတွေ ရေးတာပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုမမှန်မကန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး တပ်မတော်ကို တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာ ဆံပင်တွေလည်းဖြူ အသက်တွေလည်း ကြီးရင့်ပြီး နောက်ဆုံးခရီးလမ်းမှာ မြန်မာဓလေ့နဲ့ ဆွမ်းတောင် မသွပ်နိုင်ရှာကြဘူး။ အလှူအတန်း ကောင်းမွန်စွာ မလုပ်နိုင်ကြဘူး။ တိုင်းတပါးမှာ အခြေချလိုက်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေပေါ့ဗျာ။ သူခိုးကလူကို ပြန်ဟစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား နောင်တရသူတွေ အင်မတန် များပြားသော်လည်း ကိုယ့်ဘ၀ရပ်တည်ချက်အတွက် သေတမန် သက်တဆုံး သူတပါးနိုင်ငံမှာ ကျွန်ခံနေကြတာ သတိမထားမိကြဘူး… သူတို့ကပြောကြတယ် မြန်မာပြည်သူတွေ ကျွန်ဖြစ်နေတာတဲ့… ကိုယ့်ဘ၀ကိုလည်း ကိုယ်ပြန်ကြည့်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ချင်တယ်။ အခုတော့ ကျွန်ဖြစ်ရုံတင်မက ကျွန်ဝယ်ရာအစစ်ပါ ဆိုသလို သားသမီးတွေပါ အမွေခံနေရတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒီလောက်ဆို ရှင်းသွားပြီးလို့ ထင်ပါတယ်… ဘယ်သူကျွန်ဖြစ်နေသလဲပေါ့… ကျွန်စနစ်က သူများကို လွတ်မြောက်ဖို့ မပြောပါနဲ့အုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ဆုံး ကျွန်ဘ၀က လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားကြပါလို့ ပြည်ပအတိုက်ခံများနှင့် မမှန်မကန် သတင်းရေးသော မီဒီယာအဖွဲ့များကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ကို ထိပါးစော်ကားလာရင် မခံနိုင်ပဲ ပြန်ချမည့်လူတွေ အများကြီးရှိခဲ့လို့ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တယ်။ ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေထဲမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်အပါအ၀င် တပ်မတော်ရဲ့ အသက်၊ သွေးချွေးတွေလည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ပြည်သူတွေအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီထောက်ပံ့ ပေးရုံသာမက အသက်ပေးကာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာက သမိုင်းမှာမှတ်ကျောက် တင်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ ယခုလို တပ်မတော်နှင့် တပ်မတော်သားတွေကို အပြစ်တင်ဝေဖန် အပုတ်ချနေခြင်းကိုလည်း မခံနိုင်သော သစ္စာရှိသော မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှိသော ပြည်သူထဲမှ ပေါက်ဖွားလာသော တပ်မတော်သားတွေ အနေဖြင့် လက်ပိုက်ကြည့်နေမည် မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်စောက်ရှောက်တဲ့ အစဉ်လာကောင်း တစ်ရပ်တော့ တပ်မတော်မှာရှိခဲ့တယ်… ကျေးဇူးတရားချင်း ယှဉ်ကြည့်ရင် တပ်မတော်ကို မမှီနိုင်ပါဘူးလို့ ပြည်ပသြဇာခံတွေ၊ မီဒီယာတွေနှင့် ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုးများအား အသိပေးပါတယ်။ ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ တပ်မတော်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အတိုက်အခံလုပ်ပြီး တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူကြား ရန်တိုက်ပေးခဲ့သော်လည်း မှန်ကန်နေသောကြောင့် ရှေ့ဆက်လှမ်းနိုင်မည်မှာ နိုင်ငံတော်ကြီး ရည်ရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲခြင်းအတွက်သာ ဖြစ်ပေသည်…။
မှတ်ချက်။ ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်း ပိုင်ဆိုင်သော တပ်မတော်သည် ယနေ့အချိန်ထိ ထွန်းတောက်နေဆဲ ဖြစ်သည်…။ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်း မပိုင်ဆိုင်သော သူများအဖို့တော့ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ…… (ပြည်သူများဖြည့်တွေးကြည့်လိုက်တော့)…….။
4:29 AM NPNG(MyanmarP)
4:27 AM NPNG(MyanmarP)
4:11 AM NPNG(MyanmarP)
3:31 AM NPNG(MyanmarP)
3:11 AM NPNG(MyanmarP)
ဒီနည်းလမ်းကိုမကြိုက်ရင် နောက်တစ်နည်းရှာ ၀ါဒီဇွတ်မပေးကြနဲ့
2:56 AM NPNG(MyanmarP)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ လူတွေသည် ဦးနှောက်ရှိသော စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သော သူများဖြစ်ကြသည်။ အတန်းပညာကို လိုအပ်သလောက် သင်ယူပြီးသား ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံက သင်ပေးသော ပညာတွေနဲ့ ဘ၀မှာရပ်တည်နေတာပါ။ ကျွန်တော့်လိုပဲ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံက သင်ကြားပေးတဲ့ ပညာတွေနဲ့ ဘ၀ကိုရပ်တည်နေသူပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ အထူးစိတ်မကောင်းသော အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံမှာ နေနိုင်ရင်နေပါ။ မနေနိုင်ရင် တခြားနိုင်ငံမှာ နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်တွေလုပ်ပြီး ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကို ရှာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်မြန်မာပြည်ပြန် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလုပ်ပြီး ကောင်းရာကောင်းကြောင်းလေး နေထိုင်လို့ရပါတယ်။ အခုတော့ မိမိနိုင်ငံမှာ မနေနိုင်ပဲ ထွက်ပြေး၊ ပြေးပြီးရင်လည်း ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ချုပ်ငြိမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ရှိမြင်တွေ့နေတဲ့ အမြင်တစ်ခုကို ပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအမြင်ပေါ့။ ဖြစ်နေတာကို ပြောရရင် ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြေးပြီး အိမ်ကိုပြန်ဆဲနေတဲ့ သဘောတွေ ပေါက်နေပါတယ်။ ကိုယ့်မိုက်ပြစ်နဲ့ကိုယ် ဖြစ်နေတာကို နောင်တတွေ မရနိုင်ကြသေးဘူး။ ရုပ်တွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အသက်တော်တော်ရနေပါပြီး။ အခုချိန်ထိ သူတပါးမကောင်းကြောင်းနဲ့ အသက်ရှင်နေတုန်းပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ကောင်းတာကို တစ်ခုမှမလုပ်ရသေးဘူး…။ ဒီလိုလူတွေပေါင်းများစွာ နိုင်ငံရပ်ခြားအသီးသီးမှာ ရှိနေကြတယ်လို့ ပြောရင်လွန်မယ်မထင်ပါဘူး။
တချို့တွေဆို အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားရုံတင်မကဘူး မြန်မာနိုင်ငံကြီး ပျက်စီးပါစေဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေတောင် ရှိနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူတွေ လုပ်နေ၊ စားနေ၊ နေနေရတာကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရေးနှင့် မကင်းပါဘူး။ အရေးခင်းထပ်ဖြစ်အုံးမှာ… ချကြအုံးမှာ… မြန်မာနိုင်ငံကို အမေရိကန်က ၀င်ချအုံးမှာ… အမေရိကန်က မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်သိမ်းပါစေဆိုတဲ့ ဆန္ဒမျိုးတွေနဲ့ စာတွေကို ယနေ့ဖတ်နေရတော့ သိပ်ကိုဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုအရေးသားရှိတဲ့ လူတွေကပဲ ခဏနေရင် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ငါတို့အရေး၊ ငါတို့နိုင်ငံကွလို့ အော်နေကြပြန်တယ်။ တယ်လည်းတရားကျဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဟိုဘက်မှာ တစ်မျိုးပြောလိုက် ဒီဘက်မှာ တစ်မျိုးပြောလိုက်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းတော့ ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိ ကြောက်ရကောင်းမှန်းမသိနဲ့ ပြောချင်ရာကို ပြောနေကြတယ်။ ကိုယ်ပြောထားတဲ့ စကားကိုလည်း တာဝန်မယူနိုင်ကြတာ နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြသူတွေပဲ မဟုတ်လားဗျာ…။ ကျွန်တော်တွေးကြည့်မိပါတယ်။ ပြဿနာကို မဖြစ်အောင် ထိန်းရမယ့်အစား ပြဿနာဖြစ်အောင် အမြဲတမ်း လှုံဆော်နေကြတယ်။ ဒီလူတွေကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ပျက်စီးမှုဒဏ်ကို ခံနေကြရတာ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလွန်းပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရ မကောင်းဘူးလို့သာ အော်နေကြတယ်… ကိုယ်ကရော ဘယ်လောက် ကောင်းနေသလဲ စဉ်းစားမိရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်အလှည့်ကျရင် ဘယ်လိုကောင်းအောင် လုပ်မလဲ… ဘယ်နေရာအားနည်းချက်တွေ ရှိနေသလဲ ဒါတွေကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အပြောအဆိုတွေပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံအစိုးရကမှ တိုင်းပြည်မကောင်းအောင် လုပ်တာမရှိပါဘူး။ အကုန်လုံးက ကောင်းအောင် လုပ်နေကြတာပဲဆိုတာ မယုံကြည်စရာမရှိပါဘူး။ VOA တို့ BBC တို့ RFA စသော ဝေဖန်ရေးနှင့် လေကန်ရေး လုပ်နေသူတွေကရော မြန်မာနိုင်ငံကောင်းကြောင်း ဘာတွေလုပ်နေသလဲ… တိုင်းပြည်မှာ ဆင်းရဲတဲ့လူတွေ လိုက်ရှာအင်တာဗျူး ချမ်းသာတဲ့နေရာတွေနဲ့ ယှဉ်ပြ၊ လူတိုင်းမှာ ခံစားချက် ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ လွတ်လပ်မှုပေးရင် လူတွေက အကုန်ချမ်းသာခြင်းကြတာပဲ။ ကျေးရွာတစ်ခုမှာ မီးမလင်းဘူး ဆိုကြပါစို့… မီးလင်းအောင် VOA BBC RFA အဲဒီလေလှိုင်းအသံတွေက ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ သူတို့လုပ်ပေးနိုင်တာက အချင်းချင်းရန်တိုက်တာပဲ။ တော်တော်ရုပ်ဆိုးလွန်းတာက ရုပ်ပြပြီး အသံတွေလွှင့် ကိုယ်ကပဲသူတော်ကောင်း ကျန်တဲ့လူကမကောင်းတော့တဲ့ အမြင်တွေနဲ့။ တကယ်တမ်းတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရသာလျှင် လုပ်ပေးနေရတာပါ… နေရာတိုင်းကိုတော့ တပြိုင်ထဲနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူး… တဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ဆောင်နေကြတာ ကျွန်တော်တို့အမြင်ပဲ မဟုတ်လား။ လုပ်ပေးလိုက်လို့ ၀မ်းသာနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေက ဘာမှမပြောရဘူး။ ဒီလူတွေကပဲ သုံးသပ်ချက်တွေဆိုပြီး ထွက်လာတယ်။ အသုံးမကျတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေဆိုတာ ဒါမျိုးကို ခေါ်ရမှာပါ။ လုပ်ပေးတော့လည်း လုပ်ပေးတဲ့နေရာက ဘာမကောင်းဘူး… သူတို့အတွက်သာ လုပ်နေတာဆိုတဲ့ ဝေဖန်ရေးမျိုးတွေက ကျွန်တော်နားနဲ့ နားထောင်လို့တောင် မရဘူး။ ဒါကကောင်းတာကို လက်မခံနိုင်တဲ့ အုပ်စုတွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်သွားရင် သတင်းပြောစရာ၊ အပြစ်ပြောစရာ မရှိမှာဆိုးလို့ ကြံဖန်ရှာဖွေ ပြောဆိုနေတဲ့ မြန်မာပြည်ဖျက်သမားတွေသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားလွန်းပါတယ်။
မီဒီယာတွေမှ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အချက်တွေက ကောင်းကျိုးတွေလား ဆိုးကျိုးတွေလားဆိုတာ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်အောင် ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ ပြောပြပါမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ ဘုရားတရားနဲ့ ဆိုင်တာလေး ပြောပါမယ်။
(၁)ဘုန်းကြီးတွေကို ရိုက်တာမရိုက်တာ သေနတ်တွေနဲ့ ပြစ်တာမပြစ်တာကို အရင်ဆုံးဖယ်ထားလိုက်ပါဦး…။ ပစ်တယ်ရိုက်တယ်လို့ ဒီမီယာတွေက သတင်းဆိုလာတယ်… ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ အဲလိုမလုပ်ရဘူး… ဘုန်းကြီးအတုဆိုပေမယ့်လည်း သင်္ဃန်းကိုတော့ လေးစားရမယ်လို့ သူတို့တွေ ပြောကြတယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး… စက်တင်ဘာအရေးခင်းကို အမှတ်တရဆိုပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် ဇာတ်ကားတစ်ကား ရိုက်ကြတယ်… အဲဒီထဲက အခန်းတစ်ခန်းကို ထုတ်နုတ်ပြကြည့်မယ်။ ဒီဇာတ်ကားရိုက်တဲ့လူတွေရော စီစဉ်သူတွေရော မစဉ်းစားမိတဲ့အချက် သူတပါးကိုသာ အပြစ်ပြောနေကြတာ… သူတို့ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာက ဘုန်းကြီးအခန်းလုပ်တဲ့ ခပ်၀၀နဲ့ လူတစ်ယောက်ကို စစ်သားအခန်းသရုပ်ဆောင်ရတဲ့ လူနှစ်ယောက်က အခန်းထဲ ဆွဲခေါ်လာတယ်… ပြီးတော့ ရိုက်တယ်… သေနတ်ဒင်တွေနဲ့ရိုက်တယ်။ မျက်နှာကို ဖိနပ်နဲ့တက်နင်းတယ် စောင့်ကန်တယ်။ သင်္ဃန်းကို အတင်းချွတ်တယ်။ မယ်သီလရှင်အခန်း သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ မိန်းမကိုလည်း ဒီလိုပဲ လုပ်ပြီး သူတို့တွေ ဇာတ်လမ်းကို ရိုက်သွားကြတယ်။ အဲဒါတွေအကုန်လုံးကမှ အပြစ်တွေပဲ…။ သူတို့လုပ်လို့ ငါတို့လိုက်လုပ်တာက ကောင်းတာကိုသာ အတုခိုးရမယ်။ မကောင်းတာကို လိုက်အတုခိုးတယ်ဆိုတော့ ဒီလူတွေသည် အကုသိုလ်ကို ၀ယ်ယူတာပဲ။ ဘာသာရေးနဲ့ အခုလို အကွက်ချပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင် လုပ်တာဟာ ကြီးလေးတဲ့အပြစ်တစ်ခုပဲ…။ စက်တင်ဘာတုန်းက ဖြစ်တာက ရုတ်တရပ်ဖြစ်လာတာကို လုပ်ကြရတာ…။ အခုဒီဇာတ်လမ်းရိုက်တာက အချိန်အများကြီး ယူကြပါတယ်။ ဒီလူတွေ ကိုယ်လုပ်နေတာကို အကုသိုလ်ဆိုတာကို မသိကြဘူး သူတပါးလုပ်တာကမှ အကုသိုလ်လို့ ထင်ပြီးလုပ်ကြတာ အင်မတန် မိုက်မဲလွန်းလှပါတယ်။
(၂) အကြောင်းအရာတွေက မဆီမဆိုင်တာတွေ အရမ်းများလာတယ်။ မြန်မာစကားပြောနေတဲ့ မြန်မာတွေက အသံလွှင့်ဌာနတွေမှာ ၀မ်းရေးအတွက် အလုပ်လုပ်နေကြတယ်။ ဒီလူတွေ နေ့တိုင်းလိမ်ညာနေတယ်။ ဘယ်ဘက်မှ မပါပဲနဲ့ မှန်တဲ့ဘက်ကနေ ရပ်ကြည့်ရင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သူများမကောင်းကြောင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုအေးချမ်းမှာလဲ။ ဒါကြောင့်လဲ သူတို့ရဲ့ဘ၀က အမြဲတမ်း ပူပင်သောကတွေ ရောက်နေကြရတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုက မကောင်းတဲ့ဘက်ကို ရောက်နေမှတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်သည် ကောင်းသည်ဟု ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ပြီး လူအများကို အသံလွှင့်၊ ရုပ်ပြ လုပ်နေကြတာလဲ။
လုပ်ရပ်တွေက ရပ်တန့်သွားမလားလို့ ကြည့်နေတာ အခြေနေကဆိုးသထက် ဆိုးသွမ်းလာတယ်။ ဆရာတော်အရှင်ပညာနန္ဒ အမေရိကရောက်စဉ်က VOA သတင်းဌာနက အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို မြန်မာလူမျိုးတွေ အားလုံးက ရိုးသေလေးစားကြတယ်… ဒါအပြင့် လူသားတွေ ကောင်းကျိုးအတွက် တရားပြနေတဲ့ ဆရာတော်ကို မေးမြန်းမှုတွေက အဓမ္မမှုတွေပါနေတယ်။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူများ ကြည်ညိုလေးစားရတဲ့ ဘုန်းကြီးကိုတောင် မလေးစားဘူး… ရိုသေထိုက်သူကို မရိုသေတာ၊ ဂါရ၀တရားမထားတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ မဟုတ်တာ။ တကယ်တော့ ဒီလူတွေကို မြန်မာဆိုတဲ့ စာရင်းကပယ်သင့်ပါတယ်။ ဘုန်ကြီးတောင် အလွတ်မပေးချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ သူတို့ခံယူထားတာကရော ကျွန်တော်တို့ဘာသာ ဖြစ်ပါတော့မလားဗျာ…။ ဆရာတော်တရား နားထောင်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ သြော်…ဒီလူတွေ တော်တော်ဆိုးပါလားလို့ ထင်မိတယ်။ အရင်ကတော့ မီဒီယာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှသိပ်ပြီး မပြောခဲ့ဘူး။ နားလည်ပေးလိုက်တယ်။ သူတို့လူပဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်း မြန်မာနိုင်ငံမကောင်းကြောင်းထိ သည်းခံပြီးနေပေးတယ်။ အခုလိုမျိုးကျတော့ မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုမိုက်ရိုင်းမှုတွေအတွက် ဒီစာတွေ ရေးနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းဝဖို့လုပ်နေကြတာ ငရဲတောင် မကြောက်တော့ပါလား။ ဒါမျိုးတွေကိုလည်း ရှုံ့ချပေးသင့်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှလည်း လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး…။ ပြည်သူတွေက မသိလို့သာ လိမ်တာခံနေရတာပါ။ အခုလိုမျိုး မိုက်ရိုင်းမှုတွေကိုလည်း သိအောင်လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ။
အခုလို ကျွန်တော်မြင်တဲ့ အချက်(၂)ချက်ကို ချပြီးပြောပြကြည့်တာပါ။ ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်ပဲကောင်းတယ် နိုင်ငံတော်အစိုးရ မကောင်းဘူးလို့ ထိုသူတွေ ခံယူထားကြတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သေချာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက ရန်တိုက်ပေးပြီး ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကို အသုံးချနေကြတာပါ။ ဒီလိုအသုံးချမခံရအောင် သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ အပြုအမှုတွေကိုလည်း သေချာစုံစမ်း သိရှိနားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကသာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကို တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာပါ… ထို့ကြောင့် ဒီလူတွေရဲ့ သွေးထိုးမှု မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်မှုတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဝေးဝေးကရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေက ပညာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ မီဒီယာသမားတွေက ပြည်သူတွေကို ပညာမတတ်စေချင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ ပညာမတတ်ဘူးလို့ပဲ သတင်းတွေမှာ လွှင့်ကြတယ်။ သေချာတာတစ်ခုက နှိမ့်ချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတာကို မပြောချင်တော့ မကောင်းတာနဲ့ အမြဲပိတ်ပင်ထားတယ်။ ပညာတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ အပိုင်းမှာ မြန်မာတွေ အားနည်းတာအမှန်ပဲ။ သူတပါးမကောင်းကြောင်း ပြောပြီးဆိုရင် ရောနှောပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သေချာနားလည်ဖို့ ခက်နေကြတယ်။ ယုံကြည်မှုဆိုတာက သုံးသပ်ချက်ရှိရတယ်။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှု မရှိပဲ ဟုတ်၏ မှန်၏ ဟု အမြဲတမ်း ယုံကြည်နေရင် လမ်းမှန်ပေါ်ကနေ လမ်းမှားရောက်နေပြီးလို့သာ မှတ်ယူနိုင်တယ်။ အဲလိုမစဉ်းစား မဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အခါ ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး မြှောက်ထိုးပင့်ကော် သမားတွေရဲ့ အသုံးချမှုကို ခံကြရတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ လူတွေကအကျိုးစီးပွား တစ်ခုခုရှိလို့ ဘ၀ကိုပေးဆပ်ပြီး လုပ်နေကြရတာ။ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံတဲ့လူ ယနေ့ခေတ်မှာ ရှားပါးတယ်။ သနားဖို့ကောင်းတာက ပြည်သူတွေပဲ ဘုမသိဘမသိနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ သွေးထိုးလှုံဆော်မှုကြောင့် ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့လည်း ထောင်ထဲမှာ ဘ၀ကိုနိဂုံးချုပ်နေရတယ်။
ဝေဖန်ခြင်းမှာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ကောင်းတာကိုလိုချင်လို့ ဝေဖန်ခြင်းနှင့် မကောင်းတာကို လိုချင်လို့ ဝေဖန်နေခြင်း နှစ်မျိုးပေါ့။ ကောင်းတဲ့ဝေဖန်ခြင်းကို လူတိုင်းနားလည်သလို မကောင်းတဲ့ ဝေဖန်ခြင်းကိုလည်း လူတိုင်းနားလည်ကြတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုဝေဖန်နေကြတယ်ဆိုတာ အရင်ဆုံးသိအောင် သမိုင်းပြန်လှန်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပါတယ်...။ အစမကောင်းတော့ နောင်ကိုကောင်းဖို့ မကြိုးစားပဲ... ဆက်တိုက်မှားနေတဲ့ လူတွေအရမ်းများနေလို့ စည်းလုံးမှုမရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာကြည့်ကြည့်ပါ ဘယ်သူက ကောင်းအောင်လုပ်နေလဲ ဘယ်သူကအဖျက်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေလဲဆိုတာ...???
တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ သူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သူတော့ ရှိကြတယ်။ အာဏာပိုင်းမှာဆိုလည်း အာဏာကြီးဆိုးမှု ရှိပါတယ်။ လောကမှာ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြဘူး…။ ပင်ကိုဗီဇတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အသိတရားလေးတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်သည် ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလည်း ထိုအသိတရားလေးနဲ့ လုပ်ရတာကိုပဲ နှစ်သက်တယ်။ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်ထဲမှာ အသိတရားဝင်နေတဲ့အတွက် သူ့ကိုရိုက်ပုတ်သတ်ဖြတ် ညုင်းဆဲပြီး ပြောနေစရာလည်း မလိုဘူး။ မဟုတ်မမှန်တာကို မလုပ်ဘူး… သူတပါးကောင်းကျိုးကို ကြည့်တတ်လာတယ်။ သူ့အတွက် အေးချမ်းမှုရရှိတယ်။ ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ လူတွေကျတော့ အသိတရားနဲ့မရတော့ဘူး၊ အကြောက်တရားနဲ့မှ အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ ထို့အတွက် နွားများလို ကြိမ်တို့မှ အလုပ်လုပ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ ကြောက်စရာတွေ့မှ ကြောက်အောင်လုပ်မှ ကြောက်စိတ်ဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ လူတွေကိုတော့ အကြောက်တရားနဲ့ပဲ အုပ်ချုပ်ရပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ သူနဲ့တန်မယ့် ဒီတရားနှစ်မျိုးထဲက တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ထိကရုံဖြစ်မှုတွေနဲ့၊ ဆန္ဒပြမှုတွေသည် အကြောက်တရား လိုလားသော သူတို့၏ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကိုရှောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ။ အသိတရားကသာလျှင် မိမိတစ်ဘ၀လုံးကို ကောင်းအောင်ပြုပြင် ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
အသိတရားနဲ့ လုပ်ရတာ မကြိုက်ရင် အကြောက်တရားကို ရွေးပါ။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ဒီနှစ်ချက်ကိုတော့ လက်ခံရမှာပဲ။ ရှေ့ကလည်း မသွားနိုင်ဘူး။ နောက်ကလည်း မလိုက်နိုင်ဘူး၊ ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ နှောက်ယှက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အသင့်တော်ဆုံးတရားက အကြောက်တရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အဲလိုလူမျိုးတွေသည် အမြဲတမ်း စိုးရိမ်ပူပင်သောကတွေနဲ့ ဘ၀ကို နိဂုံးချုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက တိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံရှိတယ်။ ဒီနည်းလမ်းမကြိုက်ရင် နောက်တစ်နည်းရှာပါ၊ အဲဒီ တခြားနည်းနဲ့ ဘယ်လိုကောင်းအောင် လုပ်မလဲဆိုတာကိုသာ သေချာစဉ်းစားကြပါ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာတွေကို စပ်လျဉ်းပြီး ဘယ်အရာကောင်းသလဲ ဘယ်အရာမကောင်းသလဲ သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ အပေါ်ယံမြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မကောင်းတဲ့လူက ကောင်းတဲ့လူကို အမြဲနိုင်တယ်… အဲဒီမကောင်းတဲ့လူက အကုသိုလ်ကိုတော့ မနိုင်ပါဘူး…။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားတွေကို ထပ်ဆင့်ကမ်းနေတဲ့လူတွေနဲ့ အမှန်တကယ် အရောင်ဆိုးသူတွေကို ဖယ်ရှားသင့်တယ်လို့ ဆန္ဒပြုရင်း…………………။